Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka Jaaliyada Ogadenia ee Canada Ontario- oo Shir isugu yimid.
Maamulka Jaaliyada Ogadenia ee Canada Ontario- oo Shir isugu yimid.
Posted by Daljir	/ January 2, 2019
Maamulka Jaaliyada Ogadenia ee wadanka Canada gaar ahaan gobalka Ontario ayaa xalay shirkii caadiga ahaa isugu yimid kaasi oo lagu gorfeeyay laguna kala warqaatay siyaasada Ogadenia iyo bariga africa.
shirkan oo ka soo qabgaleen maamulada kala duwan ee magaalooyinka Ottawa , Kitchener iyo Toronto ayaa waxaa xidhiidhinnayay xidhiidhiyahay jaaliyadaha Ogadenia ee bariga Canada Halgame Mahamed Tuube.
Furitaan wacdi diini ah kadib waxaa war bixin laga dhageystay Halgame Mahamed Daah oo ah Gudoomiyahay Jaaliyada Toronto ee Soomaalida Ogadenia oo isagu safar shaqo ku tagay gudaha Ogadenia. Warbixin dheer u halkaasi kula wadaagay xubnihii shirka ka soo qabgalay, kadib waxaa laguda galay qorshaha sanadka cusub ee 2019 u yaala jaaliyada Ogadenia ee bariga Canada, Sida dhaqaalaha , siyaasada iyo Abaabulka.
Falanqayn dheer oo saacado qaadatay waxaa laysu raacay in fadhiga laga koco xiliga kala guurka ah Hiil iyo hoona lala garab istaago Madaxda iyo howl wadeenka ku sugana gudaha Ogadenia sidii loo gaadhi lahaa rabitaanka shacabka Ogadenia, loogana midha dhaliyo wadadii dheerayd u soo baray Halganka Gobanimadoonka Shacabka Ogadenia ay hormoodka u tahay JWXO.